WARARKA BARAAWEPOST talaado 25 dEcemeber 2012<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Oo Habeenkii Labaad Kormeer Ku Sameeyay Degmooyin Ka Tirsan Gobolka Banaadir
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka oo ay wehliyaan taliyayaasha Ciidamada Booliiska S/&Gaas Shariif Sheekhuna Maye iyo nabadsugida goblka Banaadir Khaliif Axmed Ereg ayaa habeenkii Labaad kormeeeray xaafado ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir.
Kormeerka wasiirka arrinaha gudaha iyo amniga Qaranka Cabdikariim Xuseen Guuleed uu ku tagay xaafado ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ujeeddadiisu aheyd u kuurgelida sida ay ciidamada ammaanku uga howlgalaan Xaafadaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir.
Wasiirka o iyo saraakiishii ku wehelisay ay kormeerkiisa ayaa waxa ay ku soo wareegeen xaafado ka mid ah degmooyinka Deyniile, Yaaqshiid, iyo C/casiis, iyadoo wasiirka iyo saraakiishaas ay si gaar ah kormeerkooda ugu dheeraadeen xaafado ka mid ah degmada Deyniile, kuwaasoo la rumeysanyahay in ay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaadka Shabaab isla markaana lagu tuhmayo inay yihiin halka laga soo rido hoobiyeyaasha iyo madaafiicda kale ee lala soo beegsado xarunta madaxtooyada.
Taliyaha ciidamada Booliiska Soomaaliyeed S/Gaas Shariif Sheekhuna Maye ayaa saxaafadda u Sheegay in ciidamo isugu jira Booliis iyo Nabadsugid la geeyay deegaanka loo Yaqaano Tiida oo ka tirsan degmada Deyniile.
Taliyaha ayaana xusay in waxii maanta ka dambeeya ay halkaasi joogaan Ciidamo Booliis iyo Nabad Sugid isugu jira kuwaasoo sameyn doona roondooyin habeen iyo maalin ah ay kaga hotragayaan kooxda AL-Shabaab ee Madaafiicda magaalada kusoo garaacda.
�Goobtan waxaa la yiraahdaa Tiida waa meeshii habeen hore iyo marar kale ay kooxaha nabad diidka ka soo tureen hoobiyeyaal loo riday dhinaca madaxtooyada, waxaan dhignay ciidamo isku dhaf ah oo ka kooban nabad sugid iyo Boolis oo habeen iyo maalin shaqeynaya� ayuu intaa ku daray Major Jeneral Maye.
Taliyaha Booliska ayaa sheegay ineysan mar kale jiri doonin madaafiic lagu soo tuuro magaalada Muqdisho, ayna amaanka sugayaan ciidamada dowlada oo kaashanaya shacabka sida uu yiri, wuxuuna sidoo kale xusay iney jiraan qorsheyaal kale oo laagu doonayo in lagu xoojiyo amaanka caasimada.
Sidoo kale Taliyaha Hay�ada Nabad Sugida Gobolka Banaadir Khaliif Axmed Ereg taliyaha ciidamada Nabadsugida ee G/Banaadir oo hadlay ayaa Sheegay in ciidamadu ay howlgal iyo roondo joogta ah ka sameyndoonaan Xaafadaha degmada Deyniile.
Khaliif Axmed Ereg ayaa sidoo kale caddeeyay in ciidamada Nabad sugiddu ay ka qeyb qaadan doonaan xaqiijinta iyo kahortaga kooxda Al-Shabaab iyo goobaha ay madaafiicda kasoo tuuraan ee degmada Dayniile Habeen iyo Maalina ay ciidanka shaqeyn doonaan.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka C/kariim Xuseen Guuleed oo xalay Shir Jaraa�id ku qabtay Ex-konrtool Balcad ayaa sheegay in ujeedada kormeerkiisa Ay tahay , la socoshada sida ay u shaqeeyaan ciidamada amaanka, si loo dardar Geliyo howlaha lagu sugayo ammaanka caasimada.
Waa habeenkii Labaad ee wasiirka arrimaha gudaha uu kormeer ku tagayo qaar Ka mid ah degmooyinka G/Banaadir si uu hubiyo qaabka ay ciidamadu uga Howlgalaan degmooyinkaasi.